Doodwadaag waa Danwadaag. | Author Archives
Home » Entries posted by Sh.Jibriil
Stories written by Sh.Jibriil
“Noloshaan waan na wareerisay. Dhib, shaqo, gaajo, lacag la’aan, khilaaf, dagaal, cabsi, eex, caddaalad darro, nolosho dhib badanaa. Noloshaan ma leedahay waddo toosan oo haddii la raaco waxaas oo dhan xal…
March 2, 2015Comments Off on Fahanka Nolosha (Qeybtii 1aad).Read More
Dabeecadda Qaranka iyo Qabiilka
Waxaan halkaan ku sharaxayaa tilmaanta runta ah ee Qabiilka iyo Qaranka. Ma wada socon karaan mise maya? Haddii ay iskeeni waayaan kee ayaa u fiican nolosha aadanaha iyo danahiisa. Tilmaanta…
January 16, 2015Comments Off on Dabeecadda Qaranka iyo QabiilkaRead More
Is-qarxinta iyo Sababaheeda
Is qarxintu waxay ka jirtaa dhammaan caalamka Muslimiinta ee sunniga ah. Soomaaliya waxay kamid ahayd kuwa ugu danbeeya ee la baray ama la soo gaarsiiyay qaabkaan cusub ee dagaalka. Marka…
November 4, 2013Comments Off on Is-qarxinta iyo SababaheedaRead More
Qirashadu waa tubta hagaagga iyo dib u soo laabashada qarannimo!!!!!.
Waxaan u baahan nahay inaan qiranno in wax weyn inaga khaldanyihiin. Waxaan filayaa Soomaali oo dhan saqiir iyo kabiir, rag iyo dumar, kuwa baadiyaha ku nool iyo baladka ku noolba…
September 19, 2013Comments Off on Qirashadu waa tubta hagaagga iyo dib u soo laabashada qarannimo!!!!!.Read More
Gobonnimadu; Waa Xorriyadda Maskaxda!!!
Xorriyadda fikirku waa arrin lama huraan u ah nolosha, dadkuse isku si uguma baraarugaan, isku sina uma qiimeeyaan. Taxanihii sooyaalka dadku soo maray ilaa iyo hadda aan joogno xorriyadda iyo…
April 19, 2013Comments Off on Gobonnimadu; Waa Xorriyadda Maskaxda!!!Read More
Qaab-fikirkeenna Ayaa Sameeya Nolosheenna. W/Q Sheekh C/raxmaan Jibriil
Wax badan oo noloshaada ka mid ah, waxay ku xiran yihiin sida aad u fkirto iyo waxa aad rumaysantahay. Haddii aad rabto ama aad jeceshahay inaad xoolo badan hesho oo…
March 15, 2013Comments Off on Qaab-fikirkeenna Ayaa Sameeya Nolosheenna. W/Q Sheekh C/raxmaan JibriilRead More
Maxaa keena in qof is qarxiyo?
Is qarxintu waxay ka jirtaa dhammaan caalamka Muslimiinta ee sunniga ah. Soomaaliya waxay ka mid ahayd kuwii ugu danbeeyay ee la baray ama la soo gaarsiiyay qaabkaan cusub ee dagaalka.…
September 19, 2012Comments Off on Maxaa keena in qof is qarxiyo?Read More
Qaanuunka abaal marinta
Qof kasta oo muslim ah wuxuu rumaysan yahay, ama caqiido u ah, inay jirto abaal marin Alle uu addoomankiisa abaal mariyo. Dadka qaar waxay u haystaan in abaal marintu ay tahay aakhiro…
July 2, 2012Comments Off on Qaanuunka abaal marintaRead More
Xaqiiqadu waa shay la raadiyo oo dhib iyo dadaal loo maro. Haddii aad adigu xaqa mar Walba ogtahay, ku taagantahay, dadka kale oo dhan baadil ayay ku taagan yihiin. Haddii…
June 30, 20122 CommentsRead More
Dulmiga haweenka lagu haayo
Guud ahaan waxaan ka dharagsan nahay muhimmadda ay gabdhuhu leeyihiin iyo sida nolosha aadanuhu u gudhisantahay Nin iyo naag. La’aanta midkood nolosha aadanuhu ma suuroobayso. Way isku xiran yihiin. Haddii…